भारतबाट किन ल्याइदै थियो म्याग्दीमा विष्फोटक पदार्थ ? | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्थानिय समाचार म्याग्दी समाचार भारतबाट किन ल्याइदै थियो म्याग्दीमा विष्फोटक पदार्थ ?
भारतबाट किन ल्याइदै थियो म्याग्दीमा विष्फोटक पदार्थ ?
२०७५, २० चैत्र बुधबार २०:३५
कामको खोजीमा भारत पसेका म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–२ रूमका २६ बर्षिय चिरन रोकाले नेपाल तर्फ ल्याउँदै गरेको ठूलो परिमाणको विष्फोटक पदार्थ सहित पक्राउ परे । नेपाल सरकारले नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाको गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा सिमा क्षेत्रमा विष्फोटक पदार्थ फेला परेपछि भारतीय संचारमाध्यमले चासोपूर्वक समाचार बनाए ।
धेरै मिडियाले रोकालाई नेकपाका कार्यकर्ता नै भएका दावी समेत गरे ।आर्थिक विपन्नतासंगै साथीहरुसंगै भारत पसेका रोका कोइलाखानीमा समेत काम गर्ने गर्दथे । बेलाबेलामा घरमा आउने रोकाले भारतबाट नेपालतर्फ बारुदजन्य विस्फोटक पदाथै लैजान लागेको विशेष सूचनाका आधारमा पश्चिम बंगाल राज्यको काकँडभिट्टा पानीट्याकी नाकाबाट पक्राउ परेका थिए ।सीमााम तैनाथ भारतीय एसएसबी ४१ बटालियन टोलीले गत आइतबार नियन्त्रणमा लिएलगत्तै सार्वजनिक गरेको थियो ।
रोकाको साथबाट पाउडर, इलेक्ट्रिकल डिटोनेटर र अन्य बम बनाउने रासायनिक सामग्री समेत फेला परेको थियो । नियोगेल पावरजेल (विस्फोटक पदार्थ) प्रतिगोटा १२५ ग्राम रहेका २०५ प्याकेट र ३५५ वटा स्टीक सहितको इलेक्ट्रिक डिटोनेटर फेला पारेको थियो ।रोकाबाट फेला पारिएकालाई नेपाल र भारतमा कडा विष्फोटक पदार्थको रुपमा लिने गरिन्छ ।‘म्याग्दीका यूवाको साथबाट भेठिएको नरम विष्फोटक पदार्थ मानिदैनन्,‘अपराधजन्य गतिविधिसँगै विकास निर्माणका क्षेत्रमा प्रयोग हुन्छन्’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीका प्रहरी निरिक्षक धुव्र शर्माले भने ।
उनले विष्फोटक पदार्थ विषेशगरी कडा, नरम र समान्य प्रकारको हुने बताए । उनले भारतमा बरामत गरिएको विष्फोटक पदार्थको म्याग्दीसंगको कनेक्सनको खोजीमा प्रहरीले सक्रियता देखाएको बताए । भारत हुदै सीमा प्रहरी, क्षेत्रीय, जिल्ला हुदै इलाका प्रहरी कार्यालय दरवाङसम्मले अनुसन्धान गरिरहेको घटनालाई विप्लवको नेकपा र रुमको ढुंगाखानीमा प्रयोग गर्ने रोकालाई भरियाको रुपमा प्रयोग गरिएको हुनसक्ने अनुमान समेत गरिएको छ । सिमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षले नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
को हुन् रोका ?
विगत सातबर्षदेखि आसाम सिलंगको कोइलाखानीमा काम गदैं आइरहेका रोका गत चैत्र ५ गते नेपालबाट भारत गएका थिए । रुमबाट भारत जाने क्रममा रोकाले दरबाङमा पोखरामा होटल गर्ने तयारी गरिरहेको बताउने गरेका थिए । बेलाबेलामा घर आइरहने रोकाले छिमेकीलाई समेत ब्यापार गर्ने योजना बनाइरहेको बताउने गरेका थिए । उनका बारेमा स्थानीयलाई पनि धेरै जानकारी छैन् । विष्फोटक पदार्थसंगै भेटिएपनि रोकाको विप्लवको नेकपासंग कुनै कनेक्सन नभएको स्थानीयको भनाई छ । ‘अहिलेको खवरले धेरैले अनुमान लगाएपनि उनको सम्बन्ध छैन्,‘खानीमै काम गर्ने भएकाले खानीका बारेमा चासो देखाउँथे’ एक स्थानीयले भने ।
पछिल्लो समय घर आएको बेलामा खानीका बारेमा चासो देखाएकाले पनि भारतको सिलगुडी हुँदै सिलंग पुगेका रोकालाई रुमको ढुंगाखानीमा आवश्यक पर्ने विस्फोटक पदार्थ गाउँकै खानीमा प्रयोग गर्न कसैले पैसा दिएको हुनसक्ने अनुमान स्थानीयको छ । सोही पैसाले भारतकै मेघालय निवासी मन्त्री भन्ने ब्यक्तिबाट ७ हजार पाँच भारतीय रुपैयाँमा खरिद गरेर काकँडभिट्टाबाट नेपाल ल्याउने योजना बनाएका थिए ।एसएसबीसंगको बयानमा रुमकै हर्कलाल विश्वकर्माको नाम लिएका थिए । एसएसबीले उक्त जानकारी नेपाल प्रहरीलाई दिएपछि अहिले हर्कलाल म्याग्दी प्रहरीको नियन्त्रणमा छन् ।
रोकाले पटकपटक नाम परिवर्तन गरेकाले पनि अनुसन्धान जारी नै रहेको प्रहरीको भनाई छ । रोकालाई आवश्यक कारावहीका लागि एसएबीले खोडीबारी पुलिस थानालाई जिम्मा लगाएको छ । यता रुममा ठूलो ढुंगाखानीलाई स्थानीयले प्रयोग गदैं आइरहेका छन् । गाउँकै विद्यालयमा शिक्षक सहित आम्दानीलाई समुदायमा प्रयोग गर्ने गरिएपनि ब्यवस्थित हुन सकेको छैन् । गाउँपालिकाले पहलको प्रयास गरेपनि विवादका कारण अहिले रोकिएको छ ।
कस्तो सजाय हुनसक्छ त ?
मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को परिक्षक ४ को दफा १३४ अनुसार कडा विष्फोटक पदार्थको अवैध कारोबार वा प्रयोग गरिएमा १० बर्षसम्म कैद र १ लाख जरिवानाको ब्यवस्था छ । रोकाले नेपाल भित्राउन लागेका इलेक्ट्रिकल डिटोनेटर, नियोगेल पावरजेल लगाएतलाई मुलुक ऐनमा कडा विष्फोटक पदार्थ उल्लेख गरिएको छ । मुलुकी ऐनले छिमेकी राष्ट्र भारतबाट संविधान विपरितका गतिविधि गर्नेलाई समेत ऐन अनुसार नै कारवाही गर्न सक्ने भएकाले पनि रोकालाई नेपालमै ल्याएर थप अनुसन्धान गरिने छ ।
Previous articleतराईका हावाहुरी पीडितलाई सहकारीको सहयोग
Next articleएनआइसी एशियाले ल्यायो चमात्कारिक बचत निक्षेप योजना